Degso Car Mechanic Simulator 2018 loogu talagalay Windows
Degso Car Mechanic Simulator 2018
Degso Car Mechanic Simulator 2018,
Mechanic Simulator 2018 waa isku xirka ugu dambeeya ee taxanaha ciyaarta jilitaanka ee caanka ah.
Ciyaartan dayactirka baabuurka oo aan ku ciyaari karno kombiyuutarradaada ayaa na siinaysa fursad aan ku dhisno oo ku kobcinno boqortooyadeenna adeegga baabuurka. Sawirrada Baabuurka Makaanik Simulator 2018, oo lagu soo saaray xaqiiqada dhabta ah, ayaa sidoo kale ku jira tayada sawirka; laakiin muujinta ka dhigaysa ciyaarta mid ka duwan kuwa dhiggooda ah waa heerka faahfaahinta. Waxaa jira kumanaan qaybo baabuur ah oo ku jira Sim Mechanic Simulator 2018, oo mid kasta oo ka mid ah qaybahan waxaa loo qaabeeyey si faahfaahsan ugu fiican.
In Mechanic Simulator 2018, ciyaartoydu waxay ku dayactiri karaan oo rinjiyeyn karaan gawaarida aqoon -isweydaarsigooda. Ka dib, waxaa sidoo kale naloo oggol yahay inaan hagaajinno oo wadno baabuurta. Waxa kale oo suurtogal ah ciyaarta in aan soo celin karno baabuurtii hore oo aan u beddeli karno baabuur aad u qurux badan. Waxaan u soo booqan karnaa junkyards iyo garaashyada shaqadan.
Mechanic Simulator 2018, waxaa jira in ka badan 40 baabuur oo la dayactirayo, in ka badan 10 qalab, iyo in ka badan 1000 qaybood oo laga dooran karo. Waxa ugu fiican ee ku saabsan ciyaarta ayaa ah inay sidoo kale ku jirto tifaftiraha baabuurka. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa gawaaridaada ciyaarta adiga oo adeegsanaya tifaftirahaan.
Shuruudaha nidaamka ugu yar ee Mechanic Simulator 2018 waa sida soo socota:
- 64-bit Windows 7 nidaamka hawlgalka
- 3.0 GHz Intel Core i3 processor
- Nvidia GeForce GTX 660 kaarka garaafyada oo leh 2GB xusuusta fiidiyaha
Car Mechanic Simulator 2018 Noocyada
Horumar: PlayWay SA